အသက် ၂၁ - ၁၀ လအကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှပြောင်းလဲသွားရသနည်း။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အသက် ၂၁ - ၁၀ လအကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှပြောင်းလဲသွားရသနည်း။
6 နှစ်ပေါင်းငါလက်ဝှေ့နှင့်ကာယဗလလေ့ကျင့်ခဲ့ကြသည်။ ငါမဆိုကြွက်သားသို့မဟုတ် veiny လက်အားရတယ်ဖူးဘူး။ NoFap ကြိုးစားမှု (အရှည်ဆုံး 10 ရက်ပေါင်း Streak) ၏ 39 လကြာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မအမြဲအိပ်မက်မက်ခန္ဓာကိုယ်ရာ၌ခန့်ထားပြီ! အကြှနျုပျ၏ခြေထောက်ငါ၏အခါးထက်နောက်ဆုံးတော့ပိုမိုပါးလွှာဖြစ်ကြသည်။ ငါ့ကျောနှင့်ပခုံးနှင့်လက်မောင်းအကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာ၏ကျန်ထက်ပိန်ကြုံခြင်းနှင့်ပိုကြီးဖြစ်ကြသည်။ ငါတောင်မှသွေးပြန်ကြောရှိတယ်, ငါ့တင်ပါးဆုံတွင်းပေါ်စာသားမျှအဆီရှိသည်။ ငါ့လက်ကို veiny ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငါ့အားကစားခံနိုင်ရည်အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ငါ 10 ထံမှ 22 ရန်, 90 ကီလိုဂရမ် (80 ပေါင်) ဆုံးရှုံးသွားသော withouth နှင့်အစားအသောက်များတွင်။ ငါ NoFap မတိုင်မီကျန်းမာစားခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ငါသည်ငါ့သုတေသနလုပ်ခဲ့တယ်ငါသည်ဤအကြောင်းမှာ NoFap ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမူးရူး arousal အတွက်ငါ့အလိုရှိသမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်သုံးစွဲခင်ဖြစ်ပျက်ကယုံကြည်ကြသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းယခုငါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားအဖြစ်ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်သို့လွှဲပြောင်းဖို့သင်ယူခဲ့ရတယ်။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
ချည် - တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုရန်ဤရှင်းပြ